स्व-सेवा र खोज ईन्जिनहरू Martech Zone
स्वयं सेवा र खोज ईन्जिनहरू
सोमबार, नोभेम्बर 12, 2012 शनिबार, नोभेम्बर ०,, २०२० Douglas Karr
ग्राहक प्रतिधारण र समग्र ग्राहक सन्तुष्टि सुधार गर्ने एक माध्यम भनेको सामग्री उत्पादन गर्नु हो जसले ग्राहकहरूलाई मद्दत गर्दछ। त्यहाँ केवल ग्राहकको सन्तुष्टिमा सुधार छैन, त्यहाँ एक सीधा लागत बचत ग्राहकहरु संग सम्बन्धित छ तपाइँको ग्राहक सेवा लाईनहरु टाई अप गर्दैन। तपाइँको ज्ञान आधार प्रकाशन, प्राय: सोधिने प्रश्नहरु, स्निपेट्स र उदाहरणहरु खोज ईन्जिनले पत्ता लगाउन सक्छ यो सम्भव बनाउँछ - प्रतिस्पर्धीहरु को डर को लागी लग इन पछाडि राख्नु हुँदैन।
भर्खरका अध्ययनहरूले हामीलाई भन्दछ कि अधिक र अधिक ग्राहकहरू समर्थन एजेन्टलाई सम्पर्क गर्नमा स्व-सेवा रुचाउँछन्; र तल इन्फोग्राफिक वर्णन, एक पूरै 91 १% ले भने यदि तिनीहरू एक ज्ञान आधार प्रयोग गर्दछ यदि त्यसले उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्दछ भने। यो व्यवसायका लागि ठूलो समाचार हो। सेल्फ-सेवा ग्राहक समर्थनको लागि सब भन्दा छिटो र सबैभन्दा कम लागत प्रभावी तरिका हो। Zendesk को इन्फोग्राफिक सुधार मा बढि बौद्धिक सेल्फ-सेवाको लागि खोजी गर्नुहोस्
टैग: ग्राहक सन्तुष्टिग्राहक सेवासोधिने प्रश्नस्वयं सेवा
हामी कसरी ब्रान्डबाट सामग्री खपत गर्छौं
यो रमाइलो कुरा हो! जीवनको लागि ज्ञान व्यवस्थापन र स्व-सेवा गर्ने केटाबाट केही द्रुत प्रतिक्रियाहरू:
1. यो अलि विडम्बनापूर्ण छ कि Oracle SEO को बारेमा खण्डमा उद्धृत गरिएको छ र वेब खोज इन्जिनहरू मार्फत तपाइँको सामग्री साझा गर्दछ, किनकि तिनीहरू B2B कम्पनीको उल्लेखनीय उदाहरण हुन् जसले Google et al मार्फत ज्ञान आधार सामग्री साझा गर्दैन। राम्रो वा नराम्रोको लागि, तिनीहरूले आफ्नो लगइन पछि आफ्नो KB सामग्री लक गर्छन्
2. मेरो डेटा धेरै, धेरै फरक छ — धेरै कम — "40% स्वयं-सेवा पछि सम्पर्क केन्द्र कल गर्नेछ।" भन्दा। यदि तपाइँ Amazon, Microsoft, आदि मा तपाइँको आफ्नै B2C अनुभव को बारे मा सोच्नुहुन्छ भने, तपाइँ देख्न सक्नुहुन्छ कि यो धेरै उच्च परिमाण को आदेश हो। तर B2B वातावरणमा पनि, वेबसाइटमा भोल्युम 10x - 30x समर्थन केन्द्रमा भोल्युम, वा अधिक छ।
3. मलाई लाग्छ गार्टनर भर्चुअल एजेन्टहरूको बारेमा गलत छ। (७०% सम्भाव्यता) 🙂
पेंगुइन र पान्डा अपडेट सामग्री पछि राजा हो। तपाईंको ज्ञानको आधार प्रकाशित गर्नाले तपाईंको एसईओ लाई बढावा दिनेछ